GNOME Web inowedzera rutsigiro rwekutanga rweFirefox Sync | Linux Vakapindwa muropa
El GNOME chirongwa Izvo zvave zvichishanda zvakanyanya zvakaoma mukubatanidzwa kwayo nemhando dzakasiyana dzewebhu webhu, uye isu tatoona mafambiro azvo Google Drive. Ndosaka zvisingashamisi kuti ivo vanoramba vari munzira iyoyo uye ikozvino vanotiratidza zvakare kukosha kukuru kwemaAPI akavhurika, mune ino kesi iwo eMozilla kubvira ikozvino pane yekutanga rutsigiro rweFirefox Sync paGNOME Web.
Kune avo vasinganyatso kuziva, zviri nezve iyo GNOME chirongwa chepamutemo chewebhu webhu, iyo yaimbove inonzi Epiphany uye iyo yagara ichitsvaga kupa nzira shoma. Y firefox sync iri bhurawuza chimiro che Mozilla yaunogona kuenderana nayo mabhukumaki, kubhurawuza nhoroondo, mapassword, kuwedzeredza uye kuvhura tabo pakati pezvikamu zvakasiyana izvo zvatino vhura pane akasiyana madhijitari uye mapuratifomu.
Kwete kuti ufare zvakanyanya, hongu, ndosaka takambotaura nezve 'rutsigiro rwekutanga' kubvira pamwe nekutsanangura vanogadzira hazvisi zvekuti isu tinokwanisa kuyananisa iwo ma tabo pakati peGNOME Web browser neMozilla, asi izvo zvavachaite kuvimba. Firefox Sync tekinoroji kubvumira vashandisi vewebhu Bvumirana nhoroondo yako yekubhurawuza, mabhukumaki, uye vhura tabo pakati pezvikamu zvakasiyana zvebrowser kubva GNOME.
Icho hachisi chinhu chidiki, uye ivo vakatarisana nekuenderera nekuwedzera mikana mune inotevera vhezheni. Ichi chinhu chinonakidza chevashandisi veiyi desktop inozivikanwa. GNU / Linux, uye yakagadzirwa naGabiel Ivascu panguva ye Google Zhizha reCode yakaitwa mwedzi mishoma yapfuura, asi izvo hazvina kuuya kuzosanganisira mune ichangobva kutangwa GNOME 3.24 (Izvo izvo isu zvataikuudza iwe nezvemazuva mashoma apfuura pano kuLinux Vakapindwa muropa).
Zvinhu zvakasimukira kumberi maererano naMichael Catanzaro, imwe yewebhu yepamusoro maeds, uye zvinopfuura zvingangoita kuti tizozviona. kumusoro uye kumhanya nenguva iyo GNOME Web / Epyphany 3.26 inosvika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME Web inowedzera rutsigiro rwekutanga rweFirefox Sync